हो, नायिकाहरु ‘हट’ हुन्छन । « Mazzako Online
हो, नायिकाहरु ‘हट’ हुन्छन ।
प्रशंग हो होली पर्वको । होलीमा सबै रंगिईरहेको बेला नेपाली फिल्म क्षेत्रका कलाकार, स्रेलिब्रेटीलाई पनि आईतबार भ्याई नभ्याई भयो । निम्ता आएजति ठाँउहरुमा होली मान्न जानै प¥यो । नगएमा रिसाउलान कि भन्ने डर , अझ यो डर भिडिया हाउससँग धेरै हुदो रैछ क्यारे ।
कलाकारहरु घुमी घुमी विभिन्न टेलिभिजन च्यानलका होली सेलिब्रेसनमा भेटिन्थे । एकैछिन एउटा टिभिीको कार्यक्रममा देखिएका कलाकार त्यसपछि हतार हतार गर्दै अर्को टिभीको कार्यक्रम भएको स्थानमा पुगेको पनि देखियो । तर जहाँ जहाँ गएपनि नेपाली नायिकाहरुलाई हट भने अवश्य देखियो ।
होली मनाउन निक्लिएका कलाकारहरु प्रति क्यामेरा अलि धेरै सोझिने भएपछि राम्रो वा राम्री भएर त निश्कनै प¥यो । फेरि टिभीमा कस्तो वा कस्ती देखिने हुँ भन्ने चिन्ता पनि त हुन्छ नि । निकै सिंगारपटार गरेर आएका नायिकाहरुको त के कुरा गरौ र ?
त्यसै नायिकाहरुलाई ‘हट’ भनिएको होईन रहेछ । होली खेल्न भर्खरै आउदाँका बेलामा नायिकाहरु ‘हट’ देखिए । होलीले रंगले, पछि त झन उनीहरुलाई ‘सुपर हट’ नै देखियो । रंगी विरंगी रंगहरुमा रंगीएका नायिकाहरुले फोटो पोज पनि गज्जबकै दिन्छन् । जब क्यामेरा उनीहरुको अघि तेर्सिन्छ वनावटी हाँसो र मुस्कान उनीहरुलाई खुबै सुहाएकै हुन्छ ।
अझ होलीमा चस्मा त अनिवार्य हुन्छ । आँखाको सुरक्षा र फेसन दुबै कुरा चस्माका फाईदा हुन् । रंगले आँखा नबिगारोस भन्नका लागि पनि होलीमा चस्मा अत्यावश्यक देखिन्छ ।
विभिन्न स्टाईल र डिजाईनमा चस्माले पनि नायिकाहरुलाई ‘हट’ देखाउछ । छालामा रंगले असर पु¥याउला र सौन्दर्य विगार्ला भनेर नायिकाहरु होलीमा धेरै नै कन्सियस भएको देखिन्छ । अन्य कार्यक्रममा छोटो लुगा लगाएर ‘हट’ देखिने नायिकाहरु होलीमा भने टम्म शरीर छोप्ने लुगामा नै ‘हट’ देखिन्छन् ।
अविर र सुख्खा रंगले मात्रै होली खेलौ भनेर नायिकाहरु कन्सियल त देखिन्छन तर होलीको माहोलनै यस्तो बनिदिन्छ कि पिचकारी र बाल्टिनको पानी कता बाट हो उनीहरुको जीउमा बर्सिइहाल्छ ।
निकै खाईलाग्दा र ज्यान परेका नायकहरुको कसैले वास्ता गर्दैन तर नायिकाहरुलाई भने खेदि खेदि पानी खन्याएर नै छाड्छन । तरपनि नायिकाहरु महान हुन्छन्, उनीहरु हाँसेकै हुन्छन, खुशी नै देखिन्छन् ।
पानीले निथ्रुक्क भिजेको पारदर्शी कपडाहरु हातले मिलाउदै गर्दा पनि उनीहरु मुस्कुराईरहेकै देखिन्छन् । उनीहरु सहनशील भएको त्यहानिर पनि देखिन्छ, त्यही भएर पनि नायिकाहरु ‘हट’ हुन्छन् ।
एक टेलिभिजनको होली सेलिब्रेसनमा पानीले निथ्रुक्क भिजाईएका अनु शाह, गरिमा पन्त, निता ढुंगाना, सुमिना घिमिरे, अशिष्मा नकर्मी, रेनेशा राई, छुल्ठिम गुरुङ्ग लगायत एकैछिनमा नायिका करिश्मा मानन्धरको निवासमा होली मनाउन पुग्दा एकदमै फ्रेस देखिए ।
उनीहरु मधमस्त भएर नाचीरहेका थिए । अघि भर्खरै भिजेको लुगा सुकिसकेको थियो । सायद नायिकाहरु ‘हट’ भएरै होला भिजेको लुगा पनि एकैछिनमा सुक्दोरहेछ ।
जसले जे गरेपनि, जसले जे भनेपनि जुनसुकै मौसम, जुनसुकै समय, जहिल्यैपनि नायिकाहरु ‘हट’ नै देखिन्छन् । नायकहरु कहाँ देखिन्छन र हट ? अनि अर्को कुरा, ‘हट’ देखिनु र हुनपाउनु नायिकाको लागि गर्वको कुरो पनि हुदोरहेछ ।
मलाई आज यो लुगाले सुहाएको छ ? म आज कस्ती देखिएकी छु ? लगायत अनेकौ प्रश्नहरुको एउटै जवाफ दिए पुग्छ, ‘हट’ । अब छोटो लुगा लगाएर मात्रै ‘हट’ देखिने जमाना कहाँ रह्यो र ?
नायिकाहरुको शालिनता र धैर्यताले पनि उनीहरुलाई हट बनाउछ । करिश्मा मानन्धर,झरना थापा, नन्दिता केसी, गौरी मल्ल, मेलिना मानन्धर लगायत नायिकाहरु छोटो पहिरनले हट देखिएका पक्कै होईनन् ।
अहिले नायिका रेखा थापा नारी प्रधान चलचित्रहरुमा मात्र काम गरेर, चलचित्रको निर्देशन पक्ष पनि आफै सम्हालेर ‘हट’ बनेकी छिन् । नायिकाहरुलाई उनीहरुले गर्ने काम र पहिचानले पनि ‘हट’ बनाएको हुन्छ ।
पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान फिल्म कर्ममा पनि आफ्नो कामप्रतिको लगन र इमान्दारीताले नै नायिकाहरुलई हट देखाउदछ । अब खुशीका साथमा भन्न सक्छौ हो नायिकाहरु ‘हट’ हुन्छन् ।